မန္တလေးတောင် sunset ကြည့်ရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မန္တလေးတောင် sunset ကြည့်ရအောင်
မန္တလေးတောင် sunset ကြည့်ရအောင်
Posted by kyawmonkhant on Feb 3, 2012 in Copy/Paste, Photography | 10 comments
(၁) မန်းတောင်ခြေက ခြင်္သေ့ကြီးနှစ်ကောင်
(၂) ဗျာဒိတ်ပေး ရုပ်ပွါးတော်ကြီး
(၃) တောင်ပေါ်မှ ဘီလူးများ
(၅) ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် မန်းတောင် သမိုင်းအရ မြတ်စွာဘုရား မန်းတောင်သို့ကြွရောက်စဉ် ဘီလူးမကမိမိရှိတာ (သားမြတ်) ဖြတ်လှူတာလို့ ဆိုပါသည်။
(၆) တောင်ထိပ်ရှိ ဘုရားကျောင်းတော်
(၇) မန္တလေးတောင်က မြွေကြီးနှစ်ကောင်
(၈) မြွေကြီးနှစ်ကောင် ပါးပျဉ်းထောင်
(၉) တောင်ပေါ်မှမြင်ရတဲ့ ရှုခင်း
(၁၀) sunset ကြည့်မယ်
(၁၄) ၃-၂-၂၀၁၂ နေ့ကို နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ နေမင်း
မန္တလေးရောက်တုန်း အင်တာနက်ကလည်း အဆင်ပြေတုန်းပို့စ် (၂) တင်လိုက်ပါသည်။ အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
အင်း … ဟုတ်တော့ဟုတ်နေပါပြီ ။ မန္တလေးသား ရန်ကုန်သွားတော့ ရန်ကုန်တခွင် ပြဲပြဲစင်စင် တွေ့သမျှအကုန်ရိုက်လို့ ရန်ကုန်မြို့ကို နှံ့သွားတယ်။ အခုလည်း ဧည့်သည်က မန္တလေး တခွင်ရိုက်ပြမှပဲ အကုန်မြင်ရအုန်းတော့မှာ။ အားပေးသွားပါတယ်နော်။
ခုရက်ပိုင်း မနက်ခင်း ကျုံးဘေးပြန်ပြေးဖို့ စဉ်းစားနေတယ်။ ပြေးဖြစ်တုန်းကဆို မနက်ရှုခင်းက အတော်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတာ ။ လူလည်း ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေတာပဲ ။ ရွာသူဖြစ်မှပဲ ညညရွာဝင်လည်တဲ့ အကျင့်တွေရ သန်းခေါင်သန်းလွဲအိပ်ပြီး မထနိုင်တော့ဘူး။
ပြောမယ့်သာ ပြောရတယ် ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာကျတော့ မြင်တွေ့နေကျမို့လား ထူးပြီး ဆန်းမနေဘူး။
တခါတလေရောက်တဲ့အခါကျတော့ မြင်မြင်သမျှ ဆန်းပြားနေတဲ့အပြင် တစ်ခါတစ်ခေါက် ရောက်တာမို့ မကြာခဏ ရောက်ဖို့ မလွယ်ဘူး ဆိုတာနဲ့တင် အမှတ်တရ ရိုက်ချင်နေတော့တာ။
မှန်၏ မန်းလေးတောင် ညနေခင်း သွားပြီးဓ်ါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတာ
မန်းလေးအလှကို ဖော်ပြသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
ဒါကြောင့်ရန်ကုန်ထက်မန်းလေးကိုပိုကြိုက်တာ … ။
လှလိုက်တဲ့ ဆန်းစက် …. ငေးမောကြည့်နေရုံနဲ့ …. စိတ်မောတွေ ခဏတာ ပြေလျော့သွားတယ် ..
ဓါတ်ပုံလက်ရာကတော့ … အလွန်ကောင်းတယ်ဗျို့ … ။
တစ်ခါတစ်လေ … စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေလျှင် အဲ့ဒီနေရာမသွားဖြစ်လျှင်တောင်မှ .. အဲ့ဒီလို ရှုခင်းပုံလေးတွေကြည့်ပြီး … စိတ်ခွန်အားမွေးဖွားရတယ် … ။ ဓါတ်ပုံတွေအတွက် ကျေးဇူးပါနော် ။
ဆန်းဆတ် ရိုက်ထားတာ လှတယ်ဗျား..
နံပတ် ၅။ က ဘီလူးမက မြတ်စွာဘုရားကို သားမြတ်လှူတယ်ဆိုတော့ အဲတာကို ဘုရားက ဘာပြုလို့ ရမှာမို့ လဲ ဟင်
“သတ်စေ” အမိန့် ရှိတယ်… အဲဒီတောင်စွယ်က
နေကွယ်ချိန် ကိုစောင့်ကြည့်ရင်း လည်ပင်းယားလာတယ်…
ခုမှပဲ မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေ ခဏပဲရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေကို ကြာကြာဖူးနိုင်တော့တယ်။ ဒီထက်နှံ့စပ်အောင် သွားသေးလား ထပ်တင်ပေးပါဦး။
မန္တလေးရောက်တုန်း အချိန်လုသွားရိုက်ပြီးချက်ချင်းတင်လိုက်တာ။ အခုတော့ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်နေပြီ။ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေလဲ ပြည့်နေတာဘဲဗျ ရိုက်ဖို့တောင် နေရာမရခြင်ဘူး။ နောက်တော့ ဘယ်တော့ရောက်ဖြစ်မယ်မသိဘူး။ မနေ့က ဓာတ်ပုံသွားရိုက်ရတာ ပျော်တယ်ဗျာ။ မန်းလေးက မန်းဂေဇက်မိတ်ဆွေတွေကိုတော့ ခေါ်ချင်သား။ သူတို့လဲ အားမှာ မဟုတ်လောက်ဘူးလေ။ ဓာတ်ပုံရိုက်တာကတော့ ရိုက်တတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ ၀ါသနာလေးလဲ နဲနဲရှိ၊ ကင်မရာလေးလဲရှိဆိုတော့ ကိုပေါက်လို လက်ဆော့ဖြစ်သွားတာပါ။ ကွန်မန့်ဖြင့်အားပေးသူအပေါင်းကို
ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ ဘီလူးမက မြတ်စွာဘုရားကို သားမြတ်လှူတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ချင်မှလဲဟုတ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုယူရင်တော့ရတာပေါ့ သူ့သဒါတရားထက်သန်တာကို ပြတဲ့ အနေနဲ့လှူတာလို့။